VPS - Shweman Online Media - Page 281 of 281 - News
”မျက်မှန်လွတ်စေတဲ့ မျက်ကြည် စားဆေး ” အ သက် ( ၃၀ )ကျော် မှ ပဲ မျက်စိ မကြည်။ မှုန်ဝါးဝါးမို့ ဆရာဝန်ပြကြည့်တော့ အနီးကြည့်ပါဝါ ( +၁၅၀ ) ဒီဂရီ မျက်မှန်တပ်ခဲ့ရသည် ။ အခုအသက်(၄၀)ကျော်မှ မျက်မှန် လွတ်လေတော့ ထူးဆန်းနေ သလို အများက
ဂျပန် အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့်ပွဲမှာ အကောင်းဆုံး မျက်နှာသစ်သရုပ်ဆောင်ဆု ရရှိခဲ့တဲ့ မိုရီဆာကီဝင်း
ဒါရိုက်တာ ကြည်ဖြူသျှင် ရိုက်ကူးပုံဖော်တဲ့ “ဇာတိမြေ” ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးနဲ့ ပရိသတ်တွေရဲ့ သတိထားမိခြင်းခံရတဲ့ မိုရီဆာကီဝင်းဟာ မြန်မာပြည်ဖွား ဂျပန်အနုပညာရှင်တစ်ယောက် ဖြစ်ပါတယ်။ မိုရီဆာကီဝင်းဟာ ဂျပန်တေးဂီတအဖွဲ့ PRIZMAX အဖွဲ့နဲ့ အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး အဖွဲ့ဖျက်သိမ်းသွားချိန်မှာတော့ တစ်ယောက်တည်း အနုပညာလုပ်ငန်းတွေ ဆက်လက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပါတယ်။ မနေ့က မတ်လ(၆) ရက်နေ့မှာတော့ မိုရီဆာကီဝင်းဟာ ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ကျင်းပပြုလုပ်တဲ့ The
အန္တရာယ်ကြီးတဲ့ဇာတ်ရုပ်နေရာမှ ဇာတ်ရှိန်တက်လာအောင်ပီပြင်စွာသရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ ပိုးအိအိခန့်
ပိုးအိအိခန့်ကတော့ တစ်ခေတ်တစ်ခါက ပရိသတ်အခိုင်အမာနဲ့ အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့တဲ့ မင်းသမီးချောတစ်လက်ဖြစ်ပြီး နိုင်ငံလက်ရွေးစင်ဘောလုံးကစားသမား အောင်သူနဲ့အတူ လက်ထပ်ထိမ်းမြှားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ အနုပညာအလုပ်တွေနဲ့ ဝေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လက်ရှိမှာတော့ သူ့ရဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုတော့ ဂန္တဝင်အငြိုးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာ မြင်တွေ့ရတော့မှာဖြစ်ပြီး ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာတော့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားလုံးကို ဇာတ်ရှိန်တတ်အောင် အန္တရာယ်အရမ်းကြီးတဲ့ ဇာတ်ရုပ်နေရာကနေ အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးမှာတော့ ကျော်ထက်အောင်၊ အကယ်ဒမီပိုင်ဖြိုးသု၊ အကယ်ဒမီမင်းဦး၊ အကယ်ဒမီမြတ်ကေသီအောင်၊ အကယ်ဒမီမယ်လိုဒီ၊ မင်းပိုင်
မန္တလေးသားလေးတွေ ကြွေသွားရလောက်အောင် အမိုက်စားဒီဇိုင်းနဲ့ ဂေါ်နေတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းမင်းသမီးတစ်လက်ဖြစ်ဲတဲ့ ဝတ်မှုံရွှေရည်က သူမရဲ့ အလုပ်အပေါ် အာရုံစူးစိုက်ပြီး စိတ်ရောကိုယ်ပါနစ်ပြီး လုပ်ဆောင်တာကြောင့် အနုပညာလောကမှာ ဆယ်စုနှစ်တစ်စုတိုင် အောင်မြင်မှုဆွတ်ခူးထားနိုင်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝတ်မှုံရွှေရည်က အကယ်ဒမီဆုကြီးနှစ်ဆုကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားပြီး မကြာခင်ကျင်းပပြုလုပ်မယ့် အကယ်ဒမီဆုချီးမြှင့်ပွဲမှာလည်း ဆုတစ်ဆုကို ရရှိပိုင်ဆိုင်နိုင်မယ်လို့ ပရိသတ်တွေက ထင်ကြေးပေးနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဝတ်မှုံရွှေရည်က လက်ရှိမှာတော့ မန္တလေးမြ်ို့ကို ရောက်ရှိနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိသတ်တွေအတွက်
Myanmar’s Pride Award ချီးမြှင့်တဲ့ Best inFilm ဆုကို ရရှိသွားတဲ့ နေတိုး
သရုပ်ဆောင် အကယ်ဒမီနေတိုး ကတာ့ “Myanmar’s Pride Awards 2019” ဆုပေးပွဲကြီးမှာ Best inFilm ဆုကို ရရှိခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှ ထူးချွန်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များအား ကျရာကဏ္ဍအလိုက် ဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ပေးတဲ့ “Myanmar’s Pride Awards 2019” ရဲ့ ဒုတိယအကြိမ်မြောက် ဆုပေးပွဲအခမ်းအနားကြီးကို Lotte Hotel မှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဆုပေးပွဲမှာတော့
မွနျမာ့ဂုဏျဆောငျအဖွဈ Myanmar’s Pride ဆုကွီးကိုရရှိခဲ့တဲ့ သကျထားသူဇာ
သက်ထားသူဇာကတော့ လတ်တလောမှာ ပေါ်တူဂီနိုင်ငံ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ရရေးအတွက် ပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့ရောက်နေပါတယ်။ သက်ထားသူဇာကတော့ ပေါ်တူဂီပြိုင်ပွဲ နဲ့ ပိုလန် ပြိုင်ပွဲနှစ်ခု Corona Virus Case ကြောင့် Cancel ဖြစ်သွားလို့ စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပေမဲ့ ဒီနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ကျင်းပနေတဲ့ Myanmar Pride Award ဆုပေးပွဲမှာ ဆုရရှိတာ သိရတဲ့အတွက် ဂုဏ်ယူပျော်ရွှင်ဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။ သက်ထားသူဇာက
မိန်းကလေးဖြစ်ဖြစ် ယောက်ျားလေးဖြစ်ဖြစ်မြို့ထဲသွားရင်သတိထားလို့ရအောင်ပါ.. !! လမ်းမှာပန်းခြံမှာ ၉နှစ် ၁၀နှစ်ကလေးတွေတွေ့ရင် သနားလို့ဆိုပြီးပိုက်ဆံပေးမုန့်ကြွေး အရောဝင်တာမျိုးမလုပ်ပါနဲ့ဒီနေ့ မြို့ထဲ၃၅လမ်းအထက်ဘလောက် လမ်းကြားထဲကပန်းခြံမှာ သူငယ်ချင်း၂ယောက်နဲ့ဓာတ်ပုံသွားရိုက်တာတစ်ယောက်ထဲဆော့နေတဲ့ကလေးကိုတွေ့တော့ ညီမလည်းသနားပြီးပါတဲ့မုန့်လေးတွေပေးလိုက်ပါတယ် ကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ ကျေးဇူးပါမကြီး ဆိုပြီး ပစ္စည်းတွေတောင်ကူကိုင်ပေးပါတယ် နောက်တော့ နည်းနည်းဝေးတဲ့ဆီသွားပြီး ရေသန့်ဘူးထဲကိုအဝါရောင်အရည်လိုလိုတွေထည့်ထားတဲ့ဘူးကိုထုတ်ရှူပါတယ်အဲ့ကထဲကမူမှန်တော့တာပါ ညီမဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့နားမှာ ဘယ်ကပါလာမှန်းမသိတဲ့ သံဘူးလိုဟာကိုမြေကြီးကိုပေါက်ချလိုက်ပါတယ် လေတိုက်တဲ့အချိန်နဲ့ကြုံပြီး ညီမမျက်ကပ်မှန်ကိုကပ်သွားတော့ မျက်ရည်တွေကျပြီးမျက်လုံးဖွင့်လို့အဆင်မပြေဖြစ်လာရော အဲ့တာနဲ့အခြေနေမကောင်းဘူး မျက်ကပ်မှန်ချွတ်ရမယ်ဆိုပြီးသူငယ်ချင်းအိမ်ကိုပြေးဖို့လုပ်ရပါတယ်အဲ့တာကိုဘယ်ဝင်သွားတာလဲ ပြစမ်းဆိုပြီးအတင်းကပ်လာတော့
လာမယ့်မတ်လအတွင်းမှာတော့ (၂၀၁၉)ခုနှစ်အတွက်အကယ်ဒမီပေးပွဲကြီးကို ကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပြီး အခုဆိုရင် ကနဦးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေဖြစ်တဲ့ ရွှေကြိုရွှေးချယ်ပွဲကြီးကိုလုပ်ကိုင်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ကတော့ မြန်မာ့ရုပ်ရှင်နှစ်(၁၀၀)ပြည့်တဲ့အချိန်လေးလည်း ဖြစ်တာကြောင့် အမှတ်တရလေးဖြစ်အောင်ဆိုပြီး ပါဝင်လျှောက်ထားသူတွေ အလွန်များပြားခဲ့တဲ့နှစ်လို့လည်း ဆိုရမှာပါ။လျှောက်ထားသူအယောက်(၁၀၀၀)နီးပါးအထိရှိခဲ့ပြီး မြန်မာ့ရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးအတွက် ရွေးချယ်ရအကျပ်ခဲ့ဆုံးနှစ်လို့ ဆိုရမှာပါ။ ပုံမှန်အားဖြင့် အနုပညာခရီးလမ်းကိုစတင်လျှောက်လှမ်းတော့မယ့် မျက်နှာသစ်မောင်မယ်တွေသာ လမ်းတစ်ခုအနေနဲ့ ဝင်ရောက်လျှောက်ထားကြတာဖြစ်ပြီး ဒီနှစ်မှာတော့ အတွေ့အကြုံရှိပြီးသား တက်သစ်စအနုပညာရှင်တွေနဲ့ ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်တွေရဲ့ဆွေမျိုးနီးစပ်တချို့ပါ ပါဝင်လာကြတာကြောင့် ဒိုင်တွေရွေးချယ်ရခက်ခဲခဲ့ကြပြီး နောက်ဆုံးမှာတော့ ဆန်ခါတင်အယောက်(၅၀)ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်
Newer 1 … 279 280 281